उपभोक्तालाई खानेपानी चाँडै « Osvevo
उपभोक्तालाई खानेपानी चाँडै
Published On :4September, 2018 9:45 am
बागलुङ, १९ भदौ (रासस) – ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिको बागलुङ नगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम शुरु भएको छ । ठेकेदार कम्पनी ‘कन्काइ जयमाता जेभी’ले संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । रु ४५ करोड २७ लाखको लागतमा बन्ने उक्त आयोजना दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । बागलुङ नगरवासीलाई चौबिसै घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको कन्काइ जयमाताका कार्यालय प्रमुख हिमाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय काठेखोलाको पानी विद्युतीय ऊर्जामार्फत तानेर बजार क्षेत्रमा ल्याइनेछ । उक्त आयोजनामा सरकारको ७० र बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त आयोजनाबाट नगर क्षेत्रका ६० हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुने शर्माले बताउनुभयो । काठेखोलाको पानी ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट तानेर बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटा पु¥याइनेछ । काठेखोलादेखि सात सय मिटरमाथि रातामाटामा बन्ने पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण गरिनेछ ।
कैलामपोखरीमा बन्ने प्रशोधन एकाइमा शुद्धीकरण भएको पानी उक्त ट्याङ्कीमा जम्मा हुनेछ । “आयोजना बनेपछि खानेपानी समस्या पूरै हट्छ,” शर्माले भन्नुभयो । आयोजनाबाट बागलुङ नगरपालिकाका– १, २, ३ र ४ का उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । बजार क्षेत्र बाहेकका गहते, बोक्से, सुल्डाँडा, रातामाटालगायतका थप नौ सय घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध हुनेछ । हाल सञ्चालित आयोजनाबाट बजार क्षेत्रका तीन हजार २०० घुरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
उक्त आयोजना समयमै पूरा गरिने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले बताउनुभयो । सो कार्यालयले आयोजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । पुरानो आयोजनाले उपाभोक्ताको माग धान्न नसकेपछि ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिको आयोजना बनाउन लागिएको हो ।
प्रहरीको समायोजनका कारण मुलुककै सुरक्षा माथी खलल पुग्ने संकेत !
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६”
अनेसासको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार प्रा.डा. खगेन्द्र लुइटेललाई
मितिः अक्टोबर ११, २०१९ अनेसासको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार प्रा.डा. खगेन्द्र लुइटेललाई । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य
सञ्चारकर्मी महराले अनाथ बालबालिका संग मनाए जन्मदिन
दीपेन्द्र बस्नेत, कञ्चनपुर, असोज २३ – पत्रकार र कम्प्युटर महासंघ सदस्य रहेका दार्चुलाका दिनेश महराले
भोला लामिछाने , यूरोप- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्पेनले दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा शुभकामाना आदनप्रदान